Ikhaya > Izindaba > Izindaba zezimboni > Izinto zokwakha ezidingekayo ekwenzeni isikhunta sepulasitiki sokusetshenziswa kwasendlini
I-PP ejwayelekile ivame ukusetshenziselwa iziphanyeko zezihlalo zesikhunta, izihlalo, indle, imiphongolo, amabheshi, amathoyizi, izinto zokubhala, izinto zehhovisi, ifenisha, amahenjisi, amabhokisi wenzuzo nokunye. I-PP eguquliwe isetshenziselwa umgqomo womshini wokuwasha, igobolondo le-TV, i-fan blade , ulwelwesi lwesiqandisi, igobolondo lezinto zasekhaya ezincane, njll.
I-Polypropylene iyi-resin ye-thermoplastic eyenziwe nge-polymerization ye-propylene.Ngokuma kwesimo sokuhlelwa kwe-methyl, ingahlukaniswa ibe yizinhlobo ezintathu: â ‘isotactic polypropylene, â‘¡ atactic polypropylene kanye â‘ ¢ interisotactic polypropylene.
I-PP engeyona enobuthi, ayinambitheki, ingafakwa emanzini abilayo ayi-100â „without ngaphandle kokukhubazeka, akukho monakalo, i-asidi evamile, izinyibilikisi ze-alkali zemvelo cishe akunamthelela kuwo isetshenziselwa kakhulu i-tableware. Amabhokisi emini ancibilika aze afike ku-167â „ƒ, okuwukuphela kwebhokisi lepulasitiki elingafakwa kuhhavini le-microwave, elingasetshenziswa kabusha ngemuva kokuhlanzwa ngokucophelela.
Ukuminyana okuncane, ukuqina kwamandla, ubulukhuni nokumelana nokushisa kungcono kune-polyethylene yengcindezi ephansi, ingasetshenziswa cishe kuma-degree ayi-100.
Inezinto ezinhle zikagesi nokufakwa kwemvamisa okuphezulu akuthinteki umswakama, kepha ukushisa okuphansi kuyaqina, hhayi ukumelana nokugqoka, kulula ukuguga.
Ukulungiselela ubuchwepheshe be-PP
I-PP ijwayele ukusetshenziselwa umjovo wokubumba: Imikhiqizo yomjovo we-PP ingabika cishe isigamu, izidingo zansuku zonke ezine-PP ejwayelekile njengezinto ezingavuthiwe, izingxenye ezenzakalelayo zokuthuthukisa noma zokuqinisa i-PP njengezinto ezingavuthiwe, okunye ukusetshenziswa okunamandla amakhulu omthelela nokushisa okuncane kwe-PP- C impahla eluhlaza.
Amaphuzu Okunakwa Ekusetshenzisweni
Elinye ibhokisi le-microwave, ibhokisi lomzimba liye ku-5 PP yokukhiqiza, kepha isembozo sebhokisi senziwa ku-1 PE, ngoba i-PE ayikwazi ukumelana nokushisa okuphezulu, ayikwazi ukufakwa kuhhavini le-microwave nomzimba webhokisi.
I-PVC iyi-polymer yama-polymerization wamahhala we-polyethylene monomer. Ingenye yezinhlobo zokuqala ze-resin ezinezimboni. Yinhlobo enkulu kakhulu ye-resin ngaphambi kweminyaka yama-1960, futhi ingeyesibili kuphela ngasekupheleni kweminyaka yama-1960.
Ngokwesisindo samangqamuzana, i-PVC ingahlukaniswa ngohlobo olujwayelekile (isilinganiso esimaphakathi se-polymerization ngu-500-1500) nezinga eliphakeme le-polymerization (isilinganiso esimaphakathi se-polymerization sikhulu kune-1700) izinhlobo ezimbili. thayipha.
Izici eziyinhloko ze-PVC:
I-1) ukusebenza okujwayelekile: i-PVC resin ingumgubo omhlophe noma okhanyayo ophuzi, ubulukhuni bemikhiqizo yayo bungalungiswa ngokungeza inani lama-plasticizers, enziwe ngemikhiqizo ethambile futhi enzima.Ukumuncwa kwamanzi kwe-PVC nokuvuleka kuncane kakhulu.
2) Izici zemishini: I-PVC inobulukhuni obuphakeme nezakhiwo zemishini, futhi iyanda ngokwanda kwesisindo samangqamuzana, kepha incipha ngokwanda kwesilinganiso sokushisa. Inani lama-plasticizers afakwe ku-PVC linethonya elikhulu kuzakhiwo zemishini. Ngokuvamile, izakhiwo zemishini ziyancipha ngokwanda kokuqukethwe kweplasticizer. Ukumelana kokugqoka kwe-PVC kuvamile.
1) ukusetshenziswa kwemikhiqizo enzima ye-PVC
Pipe impahla:esetshenziselwa ipayipi lamanzi aphezulu, ipayipi lamanzi aphansi, ipayipi legesi, ipayipi lokumnika kanye namaphrofayli wepayipi lentambo: asetshenziselwa iminyango, iWindows, amabhodi okuhlobisa, imigqa yezinkuni, ifenisha kanye ne-stair handrails.
Ipuleti:ingahlukaniswa ngebhodi lukathayela, ibhodi eliminyene nebhodi elenziwe amagwebu, elisetshenziselwa ukugoqa, uphahla, i-shutter, phansi njalonjalo.Sheet: esetshenziselwa imikhiqizo yepulasitiki, enjengezinhlobonhlobo zamabhokisi okupakisha. , intambo njalonjalo.
Isigaba sebhodlela:ukudla, imithi nezimonyo zokupakisha izinto.
Imikhiqizo yokujova:ukufakwa kwamapayipi, ama-valve, izimpahla zehhovisi izindlu nezindlu zikagesi, njll.
2) ukusetshenziswa kwemikhiqizo ethambile ye-PVC
Ifilimu:ifilimu lokushisa kwezolimo, ifilimu yokupakisha, ifilimu le-raincoat, njll.
Ikhebula:esetshenziselwa ibhokisi eliphakathi neliphansi le-voltage box sheathed cable material.
Isikhumba:isikhumba sokufakelwa, isikhumba sangaphansi nephepha lodonga, njll. Abanye: amashubhu athambile asobala, amarekhodi nama-gaskets, njll.
Kwedlule:Ukwethulwa kwemikhiqizo yeplastiki ye-PC
Olandelayo:Yisiphi isimiso ukubunjwa komjovo ku-plastic mold processing?